ISebe Q nguJussi Adler-Olsen. Uthotho kunye neenguqulelo zesinemographic | Uncwadi lwangoku
UJussi Adler-Olsen Ungomnye wababhali benoveli yeNordic abaphumeleleyo kule minyaka idlulileyo.
Iinoveli zakhe, ngakumbi iziyolo ezisixhenxe ezidumileyo ISebe Q, zipapashwa kumazwe angaphezu kwama-40. Kwaye izigidi zabafundi zibanjiwe ngamatyala asonjululwe ngumhloli ongazinzanga kwaye osoloko ekrwada. UCarl Mørck kunye nomncedisi wakho okhethekileyo nolunge ngakumbi IHafez al-Assad.
Okthobha 4 oku kulandelayo kuya kukhutshwa eDenmark Inguqulelo yefilimu kwesinye sezihloko zakhe, elesine: Ifayile 64. Kwaye njengakwezi zintathu zidlulileyo, ukujonga kwakhe i-trailer erhabaxa lolunye uhlengahlengiso olulungileyo. Ndijonga uthotho kwaye ndiyathemba ukuba le vidiyo intsha ayizukuthatha thuba lide ukuza apha.
1 UJussi Adler-Olsen
2 ISebe Q Series
2.2 Ngaba uyacebisa?
Wazalwa ngo-1950 eCopenhagenUsebenze njenge ntatheli, umhleli wencwadi ehlekisayo kunye nomhleli wamaphephancwadi. Ngo-1995 wagqiba kwelokuba azinikele ngokusisigxina ukubhala.
Uchungechunge lweSebe lakhe, kunye nabalinganiswa abavela kuhlobo olumnyama kakhulu, phantse onke amaxabiso angamadoda kunye nezopolitiko angachanekanga athi, ngenxa yempumelelo ephumeleleyo, ayidlalileyo, yenye yezona zidumileyo. Kwaye ihlala iphezulu ngaphakathi kwepanorama isagcwele abantu-nangona befuna ukubathoba kwisiseko-ngababhali baseNordic.
ISebe Q Series
Ngo-2010 ndize ngale ndlela Umfazi oye wakrwela iindonga, Ityala lokuqala leSebe u-Q, isebe lamapolisa lase-Danish lalizimisele ukuphanda zingasombululwanga kwaye zigcinwa kwimeko ezidlulileyo. Kwaye apho sidibana nabaphambili. Phambi kwakhe ngumhloli UCarl Mørck. Ngefayile ephawulwe nge isiqendu esimnyama apho ugxa wakhe enzakele kwaye yena kunye naye uphawu lwe-irascible, UMrck luhlobo lwesibetho phakathi koogxa bakhe kunye nabaphathi, ofanelwe kuphela ngumgangatho ongaphantsi apho athe waphelela khona.
Ubomi bakho bobuqu buyingxaki, kodwa wenza indawo yokwaliwa kwakhe kunye nemfazwe ngokuchasene nehlabathi ngokuhlala ekhaya kwaye anyamekele iqabane lakhe eline-quadriplegic. Kwaye kwezo bamthumela kuzo Assad, umncedisi wemvelaphi yaseSyria kunye neengxaki zolwimi, ukusebenza naye. Umsindo kunye nenkcaso kaMørck zongezwa yile nto isimilo esihle kunye nokuziphatha yomntu omtsha.
Isibini esichaseneyo kwezi ndlela zombini kunye nabalinganiswa sesinye seziseko zempumelelo kolu ngcelele. Ipolisa elibi kunye nepolisa elilungileyo, kunye nencoko yababini yoburharha obumnyama, ebukekayo kwaye ihlala ichasene. Kodwa ngenxa yeso sizathu bayancedisana kwaye bayakwazi ukusombulula amatyala. Ngokujikeleza kubo kusasaza abanye abalinganiswa besekondari, njenge Rose, unobhala ome njengendawo kunye nomdibanisi abaya kuba nabo, Unyana womfazi wangaphambili kaMrck, ohlala naye, kunye ngaphezulu kunye noogxa abanxibelelana nabo.
Kwaye kukho iyelenqe, uyathandwa nguye jika kunye neendawo ezigqwethekileyo zendalo yomntu ezihambelana ngokugqibeleleyo kwindawo ebandayo apho zikhula khona.
Umfazi oye wakrwela iindonga.
Amakhwenkwe awela emgibeni
Umyalezo oza ngebhotile
Umbhali ngokwakhe uchaze ukuba «egcwele ii-clichés»Kwaye uyabakhanyela, kodwa ubenethamsanqa lokuba uhlengahlengiso lwefilimu olwenziweyo bonwabile ukwamkelwa okuhle ngabagxeki kunye noluntu. Yongezwa ngokudibanisa okuhle kuhlobo lohlobo lweeNordics xa kufikwa ekuhambeni ba vuyayo uncwadi kwiscreen.
Umgangatho kwezi mhlawumbi ayisiyiyo kangako useto sele ingwevu emnyama yendalo abanayo. I-chiaroscuro, inkungu kunye nemibala yentsimbi ebandayo iyaphumelela. Kukho i- izinto ezilungileyo uphawu lwendlu eNordic kwaye lulunge ngaxeshanye njengeliso elibukhali labenzi beefilimu.
Kungenzeka ukuba unyango lwezo clichés lwenze umahluko kwiscreen esikhulu. Kuyo kudityaniswa ngu umbono olungileyo weshishini apho abo babecinga ngokufanelekileyo ngabantu ababandakanyekayo kulwabiwo oluphumeleleyo lwaseSweden kuthotho oludumileyo MillenniumnguStieg Larsson.
Izihloko zothotho lwefilimu olungelelanisa iinoveli ezine zokuqala zezi:
Ngo-2002 amapolisa, ngenxa yokunqongophala kobungqina, agqiba kwelokuba alivale ityala lokunyamalala kwakhe, ngexa kuhambo ngesikhephe, lukaMarete Lyngaard, isithembiso esincinci kwezopolitiko.
U-Mørck no-Assad baphanda ukubulawa ngokumasikizi kwamawele amabini amancinci kwikhaya lasehlotyeni. Iqela labafundi abakumgangatho ophezulu liphakathi kwabona barhanelwa baphambili.
Umyalezo ofunyenwe kwibhotile eScotland ufikelela kwiSebe uQ. Xa bekwazi ukucacisa into eyithethayo baya kufumana elinye ityala elilahliweyo.
Ifayile 64 (isihloko sethutyana sentsusa ye- Ijenali 64)
Ngeli xesha baphanda iindlela ezahlukeneyo zokulahleka okwenzekileyo ngeminyaka yoo-XNUMX. Uphando lwabo lubakhokelela kuNete Hermansen, umfazi owayefuna ukufihla imeko yakhe edlulileyo ade abuye. Kodwa izithunzi zibuyela kubukho bukaMørck, kwaye iimfihlo zabasebenzisana naye uAsad noRose ziya zibonakala.
Emva koko bafumana isamente, ubuncinci, ekuye kwaba yiyo inyibilikisi kakhulu. Abadlali beDanish, iSweden okanye iNorway babeka ubuso kunye nomoya oqinileyo kubalinganiswa bephepha.
A UCarl Mørck Umdlali weDanish umnika umzimba owomeleleyo kakhulu UNikolaj Lie Kaas, esenza umdlalo ohlekisayo ofanayo ongena kulusu lwalo mhloli enefrown esisigxina, mhlawumbi nokuba mnyama ngakumbi nokuqatha kunalowo ubhalayo. UKUYA AssadNangona kunjalo, umdlali we-Swedish uboleka umzimba ohluke ngokupheleleyo kumntu wokuqala. Iindleko zokuhamba, ethi yona ikwazi ukusenza siyilibale kwaye, kwimiba emininzi, iyayiphucula.
Kwaye abanye, abadlali bayabonakala abanobuchule ukusuka kumhlaba ongaphezulu okanye abamelwane abaphezulu njengamaNorwegi, abolekisa amagama amahle kwi-cinema yabo ukuya, umzekelo, umntu ombi ovela kwindima Ukuhlawulelwa, Umboniso bhanya-bhanya wesithathu.
Ewe, ukuba uthanda uthotho loncwadi ngokucacileyo, kodwa ayibalulekanga ukuba ngumfundi yabo. Zisampulu elungileyo yesona sinema sikhethekileyo seNordic kuhlobo olo. Nabani na onoluvo ngaye (isaga yaseSweden ye- IMillenium okanye uthotho kamabonakude njenge Ibhuloho, Ifunyenwe o Umdumba weVarg) uya kubaxabisa. Ndikwacebisa ukuba ubabukele kwi-OV. Isandi esingqwabalala seNordic sihamba nokusingqongileyo kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » ISebe Q nguJussi Adler-Olsen. Uthotho kunye neenguqulelo zefilimu
Kutheni sibhala. Indlela engaqinisekanga yombhali.